Madaxweyne Farmaajo markasta isaga ayay guushu ag taalaa - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Madaxweyne Farmaajo markasta isaga ayay guushu ag taalaa
Kadib tanaasulkii weynaa ee caawa ee loogu magacdaray noqon maayo qixiye ee waxaan noqon badbaadiye waxaan cidna shaki ugu jirin in madaxweynaha markasta isaga guushu raacayso. ”Awal waxa jiri jirey koox la yiraa musharixiinta haddase isku bedeshay kaaba qabiilo qayb weyn ku lahaa barakicinta ayuu yiri Cali Calasow.
”Qaskii u dambeeyay ee ka dhacay Muqdisho waxa dabada ka riixaayay kooxda XALANE oo iyagu hore u sheegay in dalku qasmi doono haddii aan la raacin wadada ay rabaan, waxayna maal iyo hub toos u siiyeen kooxda ku qaraabanaysay magaca HAWIYE.
”Waxa hore loo taagnaa halka imika kooxda sheegata beesha caalamka ay cadaadiskii ugu weynaa ku saareen madaxweynaha in lagu noqdo magaaladana ku qixiyeen dad masaakiina ayuu yiri Xuseen Warsame. Marka madaxweynaha guul ayuu taagan yahay markasta.